Berger iyo sawiradiisii ​​dabkii California | Abuurista khadka tooska ah
Kalifoorniya waxaa ku dhacay dab xoog leh goor dhaweyd sidii aysan sanado u helin. Waxay kiciyeen dhammaan noocyada muuqaalka si ay u arkaan daaraha waaweyn ee dadka caanka ah ee ololka ka maraya ama sida argagixisada loogu aasaasay nolosha dad badan oo ku nool xeebta galbeed ee Mareykanka.
Noah Berger waa sawir qaade awood u yeeshay muuji dabka ololka gudaha gudaha dabkaas Kalifoorniya. Sawiro qaar oo cadeynaya argagaxa lagala kulmi karo markay carrabka dabka ahi halis galiyaan nolosha dadka.
Berger waa khabiir ku ah arimahan iyo wixii loogu talagalay muddo ka badan 20 sano waxay ku jirtay deyr ka mid ah dabka ugu halista badan Ameerika. Sannad kasta wuxuu ku qaataa lix bilood diiwaangelinta xilliga dabka, isaga oo adeegsanaya xirfadihiisa sawir qaadista.
Sidoo kale muujinaya geesinimada dabdamiska kuwaas oo la kulmaya maalinba maalinta ka dambeysa dabeylaha dabku ka kacayo cagaha hortooda ama sida dabayshu u awood u leedahay inay u beddesho dab dabin dhimasho u ah daraasiin darawallo ah oo baabuurtooda ku jira.
Wuxuu goobjoog ka ahaa taxanaha dabka in Waxay dhigeen California dhammaan wararka adduunka oo dhan. Sawiradan, marka laga reebo inay naga dhigayaan hadal la'aan qabqabashada qaarkood, waxay muujineysaa geesiyaasha awooda u leh inay damiyaan dabkaas ama ugu yaraan xakameeyaan, markay awoodaan ...
Sawirro sida kuwa dab-demiska oo xiran a qafis bisado ka buuxaan si loo badbaadiyo, iyadoo ay shaqaaluhu daawanayaan isbitaalkoodu ololka uu ku qaraqmayo. Sawirro lagu xasuusto argaggixisada ka dhalatay dababkaas Kalifoorniya ee taariikhda soo maray qaar ka mid ah xooggii iyo khasaarihii ugu weynaa ee sababay
Waanu kaa tagnay websaydhkaaga maxaa loogu waad garan kartaa shaqadiisa si ballaaran; oo waxaan u aadnay Jupiter sawirradan cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawir laga soo qaaday gudaha dabka California